MM Popular – Page7– News And Videos
“ဇနီးနှစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပုံရတဲ့ မင်းမော်ကွန်း” ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီ မင်းမော်ကွန်းကတော့ သူ့အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရယ်ရခက် ငိုရခက်နဲ့ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်. အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ –
နာမညျကွီးမငျးသားတဈလကျဖွဈတဲ့ မငျးမျောကှနျးတဈယောကျ သူ့အဖွဈကိုတှေးပွီး ရယျရခကျ ငိုရခကျဖွဈနရှောပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ ခရီးသှားနတေဲ့ မငျးမျောကှနျးတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ ခရီးသှားရငျး တညျးတဲ့ဟိုတယျ အပွငျဘကျတံခါးမှာ ကပျထားတဲ့စာကွောငျ့ မငျးမျောကှနျးက သူ့ရဲ့ဖဘေု့တျအကောငျ့မှာ အခုလို ရေးသားမြှဝထေားပါတယျ။ “နရေထိုငျရစားရသောကျရတာအကုနျအဆငျပွတေယျ အခနျးဝမှာ ဒီစာကပျထားတာတော့ တျောတျော 1 ဘုရား ဘုရား ဂျပန် ဟို..ကားတွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ ဘာလို့များ အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ အော်ငြီးကြတာလဲဆိုတာ အခုမှ သိတော့တယ်….. ၁၈ပြည့်မှဝင်ကြည့်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား လူပုညီကအကိုနှစ်ယောက်က လူပုမလေးကိုဝိုင်းမုဒိန်းကျင့်တဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင် အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ 18နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ကြည့်ပါ…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. Oh My God ! မိုးဟေကိုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို …
“အမေရိကကို ပညာတော်သင်ဆု နဲ့ သွားခွင့်ရမယ့် မေကဗျာရဲ့ သမီးအလိမ္မာလေး” တော်လိုက်တဲ့ ခေးလေး..။ Congratulations ပါ.. သရုပ်ဆောင် မေကဗျာရဲ့ သမီးဖြစ်သူကတော့ အမေတူသမီးချောလေးဖြစ်ပေမယ့် အနုပညာထက် ပညာရေးဘက်ကို ပိုပြီးအားသာမယ့်ပုံပါပဲ။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ –
အနုပညာရှငျတှရေဲ့ သားသမီးတှဟော ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုတှရေရှိထားသလို သူတို့ရဲ့ လူမှုဘဝနထေိုငျမှုပုံစံတှကေလညျး အာရုံစိုကျခွငျးခံရမှာပါပဲ။ အိမျထောငျရေးကှာရှငျးထားပွီး သမီးလေးတဈယောကျထဲရှိတဲ့ မကေဗြာကတော့ ဒီလိုထူးခြှနျထကျမွတျတဲ့ သမီးလေး ပိုငျဆိုငျထားတာကံကောငျးတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ 1 Oh My God !နာမည်ကြီးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ အပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား လင်နဲ့မယားတွေတောင် ဒီလိုမတင်ရဲဘူး | ပုံများကြည့်ရန်*** ၁၈ပြည့်မှကြည့်နော်…..အပြည့်အစုံကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ၅ ရပ်တဲ့…. မြန်မြန်လေးနှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဝင်တာလည်းဗျာ ရှောကနဲ ရှောကနဲ အ၇ည်ရွှဲပြီးတား …..မရီးလည်း တအင်းအင်းနဲ့ ဖီးတက်နေတာပေါ့…… မြန်မြန်လေးစောင့်တူလေးရယ် အရမ်းကောင်းနေပြီ…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. …
၉၁၅ တုန်းကလို တွက်နည်းအတိုင်း admin ကတော့ အကြီုးကြီးထိုးထားပြီးပြီ မပေါက်ရင် ၃ ဆ ပြန်ပေးမယ်ရဲရဲကြီး အာမခံတယ် ပေါက်သီးတွေဘဲ့ပေးလို့ တကြိမ်မှ မလွဲဘူးနော် ပေါက်ဖူးသူတိုင်းသိတယ် ok မန့် like နဲ့ share လုပ်ထား….၃dကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။
၉၁၅ တုန်းကလို တွက်နည်းအတိုင်း admin ကတော့ အကြီုးကြီးထိုးထားပြီးပြီ မပေါက်ရင် ၃ ဆ ပြန်ပေးမယ်ရဲရဲကြီး အာမခံတယ် ပေါက်သီးတွေဘဲ့ပေးလို့ တကြိမ်မှ မလွဲဘူးနော် ပေါက်ဖူးသူတိုင်းသိတယ် ok မန့် like နဲ့ share လုပ်ထား….၃dကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God !နာမည်ကြီးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ အပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား လင်နဲ့မယားတွေတောင် ဒီလိုမတင်ရဲဘူး | ပုံများကြည့်ရန်*** ၁၈ပြည့်မှကြည့်နော်…..အပြည့်အစုံကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ၅ ရပ်တဲ့…. မြန်မြန်လေးနှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဝင်တာလည်းဗျာ ရှောကနဲ ရှောကနဲ …
“တစ်သက်စာ နှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ငါ့ဆီ ph မဆက်ပါနဲ့တော့ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ရဲရင့်အောင်”
တေးရေး၊တေးဆို အဆိုတျောရဲရငျ့အောငျတဈယောကျ သူ့ပရိသတျတှကေို စိတျလှုပျရှားအောငျလုပျလိုကျပါတယျ။အဲ့တာကတော့ “တဈသကျစာ နှုတျဆကျပါတယျ၊ငါ့ဆီ ph မဆကျပါနဲ့တော့” လို့ပွောလိုကျတာပါ။ ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အော်ညည်းကာခံသည်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ …
” ခရီးတွေထွက်နေတဲ့ ဖြိုးကြီးတို့ စုံတွဲ ” . ချစ်သက်တမ်း ၆ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ ဖြိုးကြီးနဲ့ သူ့ချစ်သူတို့ဟာ … ခရီးတွေထွက်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
” ဒီပလကျတီနမျဆှဲကွိုးက ဖဖေဝေယျပေးထားတာ … ” ဆိုတဲ့သီခငျြးသံလေးကွားရငျ ဘယျသူ့ကိုသတိရကွလဲ ပရိတျသတျကွီးရေ … အသံလုံးကွီးကွီးနဲ့ Rock သီခငျြးတှေ အဆိုကောငျးတဲ့ ကိုဖွိုးကွီးကတော့ တဈခတျေတဈခါက လူငယျပရိတျသတျတှကေို သူ့သီခငျြးတှေ ပါးစပျဖြားစှဲနအေောငျကို အောငျမွငျမှုတှပေိုငျဆိုငျခဲ့တာပါ ။ ခုခြိနျမှာတော့ ဖွိုးကွီးက လကျတှဲဖျောနဲ့ အတူ ခရီးတှထှေကျနတေယျလို့ သိရှိရပါတယျ ။ 1 ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် …
“ကြိုက်တဲ့သူကို ခေါင်းခေါက်ယူလို့ရပေမယ့် ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူးဆိုတဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)” နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ညီညီမောင်ဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်သူကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူးလို့.. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ့်ပါ…)
နာမညျကွီး မိတျကပျဖနျတီးရှငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ ညီညီမောငျဟာ သူ့ရဲ့ ခဈြသူဖွဈသူကို ဘယျတော့မှ သစ်စာမဖောကျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ..။ ပရိသတျတှကွေား လတျတလောရေးပနျးအစားဆုံး အလှဖနျတီးရှငျ မိတျကပျပညာရှငျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ..။ အခုခြိနျမှာ သူမအနနေဲ့ ကွိုကျတဲ့လူကို ခေါငျးခေါကျယူလို့ ရပမေယျ့ ခဈြသူကို ဘယျတော့ သစ်စာမဖောကျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ..။ သူမရဲ့ အခဈြရေးမှာ ဝဖေနျမှုတှရှေိခဲ့ပမေယျ့လညျး သူမ ခဈြသူကို ဘယျလောကျထိ ခဈြကွောငျး ခဈြသူကိုပဲ ရိုးမွကြေ ဆကျခဈြနမေယျ့လို့လညျး သူမက ပွောပါတယျ..။ ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ …
“လူမှုကွန်ယက်မှာကြည့်ရှု့သူနှုန်း အရမ်းကိုမြင့်တက်နေတဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်” ချူပ်သွားတဲ့တော်ကီတွေကလုံးဝကိုကြမ်းတယ်နော်….. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။)
လကျတလောလူမှုကှနျယကျမှာတော့ မငျးသမီးခြော ဝတျမှုနျရှရေညျ ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျလေးတဈခုဟာ တဈစထကျ တဈစ ကွညျ့ရှု့သူနှုနျး အရမျးကိုမွငျ့တကျနပွေီး ပရိသတျတှကွေားရပေနျးစားလို့နပေါတယျ။သူမခဈြပရိသတျ တဈယောကျရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့ကနေ မြှဝလေိုကျတဲ့ အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ နာရီပိုငျးအတှငျး မှာတငျ ကွညျ့ရှု့သူသောငျးခြီနပွေီး Share လုပျတဲ့သူတှလေညျးရာနဲ့ခြီရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ သူမရဲ့ အနုပညာခွလှေမျးအသဈလေးမှ စကားပွောခနျးလေးတဈခုဖွဈပွီး အရမျးလနျးတဲ့တျောကီတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှခေဈြမဝဖွဈနကွေရတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား …
ရွှေသာလျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အထူးဒဲ့ပေါက်ဂဏာန်း 6ကွက် …မြန်မြန်shareပြီး နှိပ်ကြလိုက်ပါ မပေါက်ရင် ၅ဆပြန်လျော်ပေးမည် …ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ် …ကွန်မန့်မှာ Okရေးပြီးမှ နှိပ်ကြည့်နော်။
(1) ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အော်ညည်းကာခံသည်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…….အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ (2) Oh My God !နာမည်ကြီးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ အပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. …
ရင်နင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ကြောက်စရာကောင်းအောင် အသက်ဆုံးရှူံးသွားတဲ့ ကိုဇော်ဝမ်း စက်မှု့လုပ်ငန်းရှင်…ထန်းလျှက်လည်း ကျွေးရသေးတယ် အသက်လည်း ပေးလိုက်ရသေးတယ် တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ
ထန်းလျှက်လည်းကျွေးရသေးတယ်အသက်လည်းပေးလိုက်ရသေးတယ်ကျမအမျိုးသားရဲ့ညီ နာမည်က ကိုဇော်ဝမ်း-ပါစက်မှု့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးပေါ့သူငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝကတည်း မြင်မြင်သမျှတိရိစ္ဆာန်လးတွေကို အလွန်ချစ်တတ်တဲ့အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့ မောင်လေးပေါ့ ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အော်ညည်းကာခံသည်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…….အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ သူ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းခွေးလေး’တွေ’ကြောင်လေး’တွေကို …
” Relationship ချိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မေသက်ခိုင် ” . သိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးမေသက်ခိုင်ကတော့ … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ဂဈြတူးလို့ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးမသေကျခိုငျကတော့ ပရိတျသတျတှကေို ပဟဠေိ ၀ှကျလိုကျပါပွီ ။ အနုပညာလောကရဲ့ သတငျးစုံကွားထဲ မငျးသမီးခြောလေး မသေကျခိုငျရဲ့ သတငျးတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုသတငျးကလှဲပွီး ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ သတငျးတှေ တှရေ့ခဲပါတယျ ။ ခုတော့ မငျးသမီးလေးက သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ ခဈြသူရှိနပွေီဖွဈကွောငျး Relationship status တငျပွီး ပွောပွခဲ့တာပါ ။ ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး …